पाेखराका ४ अस्पतालसहित गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा सुरु भयाे काेराेनाविरुद्ध खाेप अभियान | eAdarsha.com
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खाेप अभियान सुरुआत गरेका हुन्
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पश्चिमाश्चञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यलाई खोप बक्स हस्तान्तरण गरेर बुधबार अभियानको सुरुआत गरे ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनासँग जुध्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले गरेको प्रयासले सार्थकता पाउँदै आएको बताए । काम गर्ने क्रममा भएका कमजोरी सुधार्दै यसलाई अझ सशक्तरुपमा अगाडि बढाउन समेत उनले आग्रह गरे ।
पहिलो चरणको कोभिड–१९ खोप अभियानका लागि गण्डकी प्रदेश १४ वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ । कास्कीमा ४ सहित १४ स्थानमा खोप केन्द्र तोकिएको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी गराइन् । भारतको सहयोगमा नेपाललाई प्राप्त खोपमध्ये गण्डकीलाई ३९ हजार १ सय ३९ मात्रा भ्याक्सिन आएको छ ।
कास्कीसहित गण्डकी प्रदेशका अन्य १० वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई खोप केन्द्र तोकिएकोमा सबै जिल्लामा खोप पठाइसकिएको र बुधबार नै सबै जिल्लामा अभिषन सुरु भएको डा. शर्माले बताए ।